Gịnị bụ azụmahịa akporo nke elu mma CNC lathe Nsukka
Aha: Gini bu uzo ahia nke ndi na-acho CNC lathe Na ulo oru CNC, ndi oru CNC ndi na-acho ahihia ka ha malite ahia nke ihe ndi ozo di iche iche, ihe ndi ozo, na ndi ozo, ha juru inabata ahia di otua. ...
Ogologo oge ole ka ọ ga-anọ na udu mmiri
Site na mmalite nke esemokwu azụmaahịa nke Sino US, ụlọ ọrụ nhazi ngwaike, dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, amalitela oge oyi nke akụ na ụba. Ọrụ dị iche iche na-aga otu ihe ahụ. Ulo oru nile achoghi ma ha enweghi ike ipu. Mkparịta ụka ugboro ugboro nke agha ahịa US nke Sino ...
Olee otú ime ezi ọrụ reflow soldering usoro nke okpomọkụ anwụrụ okpomọkụ ahụ
Reflow technology soldering bụ usoro dị oke mkpa na nhazi nke ọkpọkọ ọkpọkọ okpomọkụ. Ngwa nke reflow soldering technology na ubi nke electronic n'ichepụta ụlọ ọrụ dị nnọọ ọtụtụ. The uru nke usoro a bụ na ọnọdụ okpomọkụ dị mfe ịchịkwa, Weld ...
Etu ị ga - esi amata ndị nrụpụta akụrụngwa dị elu dị elu, kedụ nkọwa ekwesịrị ị attentiona ntị na ya
Etu ị ga - esi amata igwe ndị na - emepụta ihe igwe nwere nnukwu nchegbu na - eche ọtụtụ ndị nrụpụta. Ọnụ ọgụgụ nke ndị nrụpụta ngwaike ngwaike sitere na otu ọkpọ ruo ọtụtụ narị igwe obibi akwụkwọ. Industrylọ ọrụ ụlọ ọrụ dị ala bụ otu n'ime ihe kpatara ọtụtụ ọnụọgụ ngwaike ngwaike ngwaike ...
Ihe dị iche n'etiti etiti igwe na NC High Speed ​​Machining Center
N'ezie, enweghi nnukwu ọdịiche dị n'etiti etiti CNC na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ na ụlọ ọrụ mgbatị ọsọ ọsọ nke CNC. Karịsịa site n'ọdịdị nke akụrụngwa akụrụngwa, enweghị ọdịiche dị n'etiti etiti ngwa ngwa ngwa ngwa CNC na ụlọ ọrụ ike izugbe. Gịnị bụ int ...
Kedu ihe dị iche na nhazi usoro lathe nkịtị na nhazi ọnụọgụ lathe nhazi
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti nkịtị lathe nhazi na space akara lathe nhazi N'etiti ọtụtụ n'ibu nhazi akụrụngwa, ndị nkịtị lathe nhazi bụkwa otu n'ime n'ibu nhazi akụrụngwa nke dịruo ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na-ewepụbeghị. Isi r ...
Warninglọ ọrụ ịdọ aka ná ntị nke ina maka machining talent na nkenke CNC nhazi osisi
Ndị mmadụ na-emekwa ụfọdụ ihe ndị ziri ezi CNC nhazi ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọtụtụ afọ ga-amarakwa na nkenke CNC nhazi factory na-akpọ kọmputa gong nhazi factory tupu. Na 2000, ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọkarị nkenke CNC nhazi factory dị ka kọmputa ...
Nyocha nyocha nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ nhazi
Site na ọnọdụ akụ na ụba ụwa, ọnọdụ nke nrụpụta ọrụ na nhazi na mba dị iche iche, mana ọtụtụ mba ka na-ele mmepụta na nhazi igwe dị ka ụlọ ọrụ nrụpụta nke mba. N'ihi na isi n'ichepụta ụlọ ọrụ nke mec ...
Etu ị ga - esi hazie ma jikwaa ndị nrụpụta igwe iji meziwanye uru ụlọ ọrụ
Na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ndị nrụpụta na-arụ ọrụ nhazi nke akụkụ akụkụ siri ike na-arụ ọrụ na njikwa karịa ndị nọ na ụlọ ọrụ eletrọniki, nke ndị ụlọ ọrụ nwere gburugburu ebe obibi na agụmakwụkwọ dị ala. Kedu otu akụkụ igwe kwesịrị ...
Ngwọta maka ịghazi njehie
Ndị mmadụ na-arụ na ụlọ ọrụ igwe maka ọtụtụ afọ na-ezutekarị na mgbe ha gbachara ya, enweghị ike ịkwado ngwaahịa ahụ ma enweghị ike iru ihe eserese ahụ. Ọtụtụ mgbe, anyị na-akọwa ihe ịtụnanya a dị ka nsonaazụ nke mmezi ọrụ. Ngwunye ngwaahịa ahụ kpatara ...
O siri ike ịnwe ndị mmadụ n’ọrụ igwe ọrụ. Ebee ka ndị mmadụ na-arahụ
N'oge na-adịbeghị anya, na ọbịbịa nke afọ ọhụrụ, ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ igwe na-eche nsogbu nke mbanye n'ọrụ. Ọ bụrụ na enweghị usoro ị ga - echegbu onwe gị, a na - echekwa maka inwe iwu, ọ nweghịkwa onye na - arụ ọrụ. Isnye ga-eme ya? Ekwenyere m na nke a bụ olu nke imerime imepụta ihe na ...
Kedu otu nzukọ họpụtara ụdị ihe ntanetị iri na Guangdong
Dị ka anyị niile maara, na nyocha ọ bụla, ọ bụrụhaala na ị na-etinye akara ọkwa iri nke radiator iri, a ga-enwe ọtụtụ nsonaazụ, nke na-eme ndị chọrọ ịchọta azịza site na nke a karịa enyemaka. Gịnị kpatara nke a? Ugbu a, China na n'ichepụta ụlọ ọrụ bụ na-eduga ọnọdụ na ...